Pfuti dzakaridzwa paYVR. Akaurayiwa kuVancouver International Airport muBC, Canada
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Pfuti dzakaridzwa paYVR. Akaurayiwa kuVancouver International Airport muBC, Canada
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau
YVR, iyo International Airport yeVancouver, Canada yaive yakavharirwa mushure mekupfura kwakaipisisa neSvondo.
Mumwe murume akapfurwa ndokuurawa kunze kweiyo main terminal kuVancouver International Airport muRichmond, BC Svondo masikati.
BC Emergency Health Services yakati vanobatsira vebhasikiti panhandare yendege vakapindura pachiitiko nguva pfupi nguva dzisati dzasvika 3 pm
Maamburenzi maviri akatumirwa kunhandare yendege mushure mekupfura, asi hapana akaendeswa kuchipatara, sekureva kweEHS.
Mushure mekunge nzvimbo yese yakatenderedza airport yeVancouver yapfurwa pasi, airport yakavhurwazve na4 pm migwagwa yakavhurwa uye Canada Line yakanga ichimhanyira kuairport futi.
Manhunt iri munzira yekutsvaga mupfuti anotyisa iyo BC Airport nhasi.
Nhandare yataura muchirevo paTwitter kuti iri kushanda neRCMP kupindura chiitiko chakaitika kunze kwenzvimbo huru yekudyira.
YVR "parizvino yakavhurika uye yakachengeteka nekutemerwa kuwana," sekureva kwe tweet.
Sezvo ivo vaitsvaga vanofungidzirwa, mapurisa akarayira kukiyiwa kwe "nzvimbo dzekupinda" munzvimbo iyi, zvichikurudzira kuvharwa kwenzvimbo dzinoverengeka dzeCanada Line uye nemigwagwa mikuru yakati wandei inopinda muguta panowanikwa airport.
Metro Vancouver Transit Mapurisa akaudza CTV Nhau kuvharwa kweSkyTrain kwaive kwekuchengetedza uye kunongedzera mibvunzo pachiitiko chaicho kuRCMP.
Iyo Massey Tunnel uye mimwe migwagwa mikuru inoenda kuRichmond yakavharwawo kune traffic nekuda kwechiitiko chemapurisa Svondo masikati, sekureva DriveBC.
Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Sachigaro Mutsva weInter-America...
Varwere veGomarara reMazamu Vekutanga Zvino Vanogona Kudzivirira ...
ITA Airways inogadzira odha yemakumi maviri nesere ndege dzeAirbus